🥇 ▷ Apple waxay badashaa magacooda: IPhone 11 Max waxaa dib loogu magacaabi doonaa iPhone 11 Pro ✅
Apple waxay badashaa magacooda: IPhone 11 Max waxaa dib loogu magacaabi doonaa iPhone 11 Pro
Waxaa lagu soo bandhigay Samsung Galaxy Note10 oo Huawei Mate 30 ah iyadoo loo iftiiminayo iftiinka tooska ah, waxaa keliya oo la ogaan karaa marka taleefannada cusub ay imaan doonaan Apple sannadkan. Goorma ayay noqon doonaan iPhones 2019, imisa ayey noqon doonaan, magaca ay lahaan doonaan iyo sida ay ahaan doonaan. Maanta daadis cusub ayaa na siinaya faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefannadan.
Apple Wuxuu is beddelay hal sano ka hor magacaabistiisa taleefannadiisa gacanta wuxuuna doorbiday magaca magaca Max ee nooca weyn halkii uu ka isticmaali lahaa midka caadiga ah. Hadda macluumaad cusub ayaa xaqiijinaya in mar kale isbeddel dhici doono: waxaan yeelan doonnaa iPhone 11 Pro iyo maaha iPhone 11 Max sidii bilo ka hor.
Summad kastaa waxay ugu yeedhaa taleefannadeeda sare siyaabo kala duwan waxayna caadiyan isla sanadkaa sanad ka dib. Marka laga hadlayo Samsung, waxaa ka go’an “Plus” noocyadeeda waaweyn ama weyn. Xaaladda Huawei waxaan aragnaa in magaca ugu dambeeya “Pro” uu jiro. Y Apple ayaa leh sharad Loogu talagalay Plus iyo ta Max. Hada Pro.
Muddo sanado ah waxaan u naqaannay Mobilada Cupertino sida iPhone iyo iPhone Plus. Sannadkii hore shirkaddu waxay go’aansatay inay wax ka bedesho magac-u-yaal isla markaana moobilkeeda ugu weyn wuxuu noqday iPhone XS Max. Hadda, shaandheyn caan ah ayaa xaqiijisay kaas oo noqon doona Moodeelka Pro. Tani waa isla shaandheyn ay sanad ka hor wadaageen magacyada macquulka ah ee iPhone XS, XS Max iyo iPhone XR kahor waqtiyada sidaa daraadeed waxay umuuqataa in saadaalintiisu ay run noqon doonto isbuucyo gudahood waxaan ku xaqiijin doonaa magacyadan.
Maxaan ka fileynaa iPhones 11?
Waxaa la filayaa inay jiraan seddex nooc, sida caadiga ah sannadihii ugu dambeeyay. Waxaa la rajeynayaa in ay jiri doonto moodal la awoodi karo oo leh qeexitaanno go’an, qaab caadi ah oo loo yaqaan “iPhone 11” iyo iPhone 11 Plus oo leh awood weyn ama shaashad weyn. Seddex mobiil oo noqon doona ku-xigeenkii sanadkii la soo dhaafay taas oo ku doodi doonta qalab cusub oo awood badan oo karti leh.
In kasta oo wali aysan jirin wax xaqiijin ah oo ka soo baxay Apple, hadana astaanta ayaa sidoo kale la filayaa inay bilawdo iswaafajinta Apple Pencil (ama mid la mid ah) oo ku taal iPhone 11 Pro aadna raacdo talaabooyinka Samsung-ka ee S-Pen ee Samsung Galaxy Note10. Laakiin waa inaan sugnaa ilaa soo bandhigista Sebtember si aan uga baxno shaki.
Marka la soo bandhigi doono iPhones-ka 2019 wali ma jiro taariikh rasmi ah oo la xaqiijiyay laakiin waa caadi in la sameeyo usbuucyada ugu horreeya ee Sebtember. Haddii wax waliba ay u socdaan sidii qorshuhu ahaa, waxaan kaga tagi karnaa shaki muddo hal bil ah.